China Alum. 5-sheet ambanin'ny zaridaina seza sy mpamatsy | Luqi
Fahafatesan-kena Zero Gravity misy tora-bato
Seza sezika miolikolika Zero Gravity miaraka amin'ireo tompon-kaopy
Fitaovana Gravity Zero miaraka amin'ny fantsona loko isan-karazany
Alum. 5-takelaka seza ivelan'ny zaridaina ivelany
Tany ivelan`ny zaridaina paty vy fitaratra vera (mihodina sisiny ...
Laharana modely: LAF-C001
Vidin'ny FOB: US $ 8,3 ~ 10,0 / Piece
Fomba fandoavam-bola: Advance TT, T / T, L / C
Fampiasana manokana: Seza seza zaridaina
Fampiasana ankapobeny: Fanaka any ivelany
Latabatra latabatra: Aluminum
Haben'ny vokatra: 54x59xH73cm
Fantsona lehibe aluminium: dia25x1.1mm
Alumats slats: Slats 3 mipetraka amin'ny seza ary 2 slats amin'ny lamosina
mahavita: Anodized Shinning Finish
MOQ: 1 boaty
Type package: afatory tsirairay tsikelikely, 19 pcs / stack. Raha asiana entana 40HQ, rakitra 22 pcs / fatana
Lanja afa-karatsaka: 1.7KG
Fe-potoana: 60 andro
tombony Of ny vokarintsika
Mamorona traikefa fisakafoanana mahafinaritra miaraka amin'ity seho latabatra ity izay hanatsarana ny bistro, kafe, trano fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny na toerana an-trano.
Ny latabatra stainless vy latabatra endrika an'ny mpamorona dia manasongadina marimaritra iraisana amin'ny fitazonana ny haavon'ny entana. Ny tsanganana sy fototra dia amboarina amin'ny fitaovana aluminium maivana.
Ny seza dia maivana ary mora mandroso sy mitahiry. Ho an'ny fitahirizana sy ny fanadiovana mora ireo seza ireo dia mipetaka hatramin'ny seza 22.
Ity andiany ity dia natao ho an'ny fampiasana toetr'andro rehetra ka mahatonga azy hanana safidy tsara ho an'ny filaharana anatiny sy ivelany. Ho an'ny halavan'ny lavalava dia tokony hatao ny fikolokoloana mba hiarovana amin'ny vanim-potoana mafana.
Na vao manomboka ny orinasanao na manavao ny fanaka ao aminao ianao dia hamita ny fijery.
50000 Piece / Pieces isam-bolana
PNy tombony azo amin'ny rimary:
Ny kompania dia manarona faritra iray mirefy 30000 metatra toradroa misy mihoatra ny 15 taona ny traikefa amin'ny famokarana vokatra fialamboly. Ny orinasa anay dia manana mari-pahaizana feno, kalitao tsara kalitao ary fanaterana entana ara-potoana.
Izahay dia mamatsy vokatra hanondrana any amin'ny tsenambarotra any ivelany ka anisan'izany ny ACE, TAIGER, IKEA, ary B&Q. Azafady azonao atao ny mifandraisa aminay amin'ny fiaraha-miasa.
Previous: Ivelan`ny zaridaina paty vy fitaratra vera (mihodina sisiny ho porofo ny rano)
Manaraka: Alum. 7-takelaka seza ivelan'ny zaridaina ivelany
Lamesa bara vita amin'ny Aluminum sy seza Factory
Bistro latabatra sy seza
Seza seza ivelany
Zavamaniry sy seza
Faritra seza ivelan'ny zaridaina
Eo amin'ny latabatra ivelany sy seza
Seza seza Wicker ivelany
Ivelan'ny latabatra sy seza
Patio latabatra sy seza
Seza azo aforitra
Alum. Fandraisana seza eo amin'ny zaridaina ivelany
Alum. 5-sheet Fanolorana zaridaina ivelany any ivelany
Alum. Lohahevitry ny Kianjan-kianja (sisiny mihidy amin'ny rano pr ...
Alum. 7-takelaka seza ivelan'ny zaridaina ivelany
Tany ivelan`ny zaridaina fitaratra vy vita latabatra (nanakodia ...
Alum. Latabatra bara (zorony mihodinana ho an'ny porofon'ny rano)